Thursday November 01, 2018 - 19:17:13 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Maleeshiyo beeleed hubeysan ayaa weerar ku qaaday xabsiga Minjir oo ay gacanta ku hayeen ciidamo katirsan maamulka isku magacaabay 'Puntland'.
Goob joogayaal ayaa warbaahinta u sheegay in maleeshiyaadka weerarka qaaday ay ku guuleysteen in ay Nabadoon Cabdu Qaadir Xarago kasii daayaan Xabsiga waloow saacado kadib uu isagu isgeeyay xabsiga.
Xiisado ka dhashay xarig uu maamulka Boosaaso ugeystay Nabadoonka ayaa wali ka taagan magaalada, taliyaha booliska gobolka Bari ayaa warbaahinta u sheegay in falal ammaan darro ay sababeen maleeshiyaadka weeraray saldhigga Booliska Minjir.
Dhinaca kale wararka ka imaanaya gobolka Nugaal ayaa sheegay in diyaarad xamuul ah ay ka dajisay gaari nuuca xabaddu karin ah, diyaaradda oo ka duushay magaalada Muqdisho ayaa garoonka Garoowe geystay gaari uu leeyahay Musharraxa lagu magacaabo Maxamuud Khaliif Xasan oo Jabiye ku magac dheer.
Diyaaraddan waa isla diyaaraddii isbuuc ka hor magaalada Baydhabo ka dajisay gaadiid nuuca aan xabaddu karin ah oo ay isticmaalayaan musharrixiinta ay wadato DF-ka.
Maamulka Cabdi Wali Gaas illaa iyo hadda kama hadlin diyaaradda gaariga ka dajiyay garoonka diyaaradaha magaalada Garoowe, bishii lasoo dhaafay bayaan kasoo baxay wasaaradda arrimaha gudaha dowladda Federaalka ayaa maamul goboleedyada lagu amray in ay doorashooyinka ku qabtaan waqtiga lagu ballamay.